“Shir-beeleedyada waxa keenay waa maamul-xumada Xukuumadda, diiwaangalintii oo 70% ay khaldanaayeen waa la laalay waxaana lagu beddalay mid 100% khaldan…” | Berberanews.com
Home WARARKA “Shir-beeleedyada waxa keenay waa maamul-xumada Xukuumadda, diiwaangalintii oo 70% ay khaldanaayeen waa la laalay waxaana lagu beddalay mid 100% khaldan…”
Guddoomiyaha Xisbiga UCID Eng Faysal Cali Waraabe Boorame-(Berberanews)- Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee UCID Eng. Faysal Cali Waraabe iyo Wefti uu hogaaminayo ayaa maanta gaadhay magaalada Boorama, isla markaana kulammo kala duwan la yeeshay qaybaha bulshada, ayaa si weyn u dhalliilay Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo oo uu ku tilmaamay mid kala socota oo dalka halkii ay kula wareegtay dib uga sii celiyey.
Weftigan uu hoggaaminayo Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee UCID Eng Faysal Cali Waraabe ayaa Shir Jaraaid oo ay ku qabteen magaalada Boorama waxay kaga warrameen ujeeddada booqashadooda waxaana uu yidhi; “Ujeeddada safarkayagu waxay la xidhiidhaa maaddaama uu soo dhawyahay shirwaynihii Xisbigu inaan la kulanno qaybaha kala duwan ee bulshada, isla markaana aan ka wada hadalno sidii loo soo diri lahaa ergooyinkii ka qayb qaadan lahaa shirwaynahaasi, xisbiga Ucid waa xisbi wayn umana baahna durbaan iyo soo dhawayn markaa booqashadayadu waa mid gaaban.” Guddoomiyaha Xisbiga UCID ayaa si kulul u dhaliilay maamulka madaxwayne Ahmed Siilaanyo oo sheegay in maalintii uu Rayaale u dhiibayay talada dalka uu dardaaran kaga tagay. “Wuxuu ku yidhi; Rayaale; ‘waxaan kaaga tagay dal iyo dad nabad ah, maanta labadiiba ma jiraan dadkii waxa uu ku dhex beeray musuqmaasuq, eex iyo qabyaalad, waxana muuqata in nabadii ay faraha ka sii baxayso. Dhinaca nabada waxa aad ogtihiin in dhulkii dalka ay ka socdaan shirbeeleedyo ku lid ah Xukuumadda waxaasna waxa keenay waa maamul-xumada Xukuumadda, diiwaangalintii oo 70% ay khaldanaayeen waa la laalay waxaana lagu beddalay mid 100% khaldan waxana aad moodaa in xukuumadani ay waxwalba oo qaloocsanaa iyadu saxatay kana dhigatay wax toosan, waxana aan leeyahay codkeena oo mid ah aan xukuumada cambaarayno dhana uga soo wada jeesano.”
Guddoomiyuhu waxa uu reer Awdal ku ammaanay kaalinta ay ka soo qaateen midnimada dalka isaga oo xusay in ay yihiin laf-dhabarta nabadda iyo hormarka, waxaanu ku amaanay sida ay u xalliyeen arrimo badan oo nabadda ku lid ah oo soo wajahay ummadda reer Awdal.
Previous PostXisbiga UDUB oo sannadka cusub la kawsaday Khilaaf garabbo u kala qaybiyey iyo wararkii u dambeeyey ee dhexdhexaadin laga galay Next PostUrur-goboleedka IGAD oo daboolka ka qaaday taageerooyin uu Somaliland u fidin doono